ZANU PF Crisis: Muchinguri threatens to spill the beans on Tongogara | The Zimbabwe Daily
ZANU PF Crisis: Muchinguri threatens to spill the beans on Tongogara
Sources said Oppah Muchinguri the key witness who was in the car in which the veteren freedom fighter was killed and the victim of the latest Zanu PF power stuggles in which she lost the post of Vice President to Joyce Mujuru, has vowed to give evidence to such an inquiry as a revenge to Robert Mugabe’s double standards.
Independent newspapers in Zimbabwe on Friday ran full-page advertisements calling for an enquiry into his death 30 years ago in Mozambique. Tongogara was the leader of ZANLA, the military wing of ZANU during the guerrilla war that brought Robert Mugabe to power in 1980. In the adverts ZDN calls for a parliamentary enquiry into the demise of Tongogara and another war hero, Lookout Masuku, and for flags to fly at half-mast on Boxing Day out of respect to Tongogara specifically.
Zezurus then captured power in Zanu PF in 1977 when Mugabe became party leader until now. SW Radio Africa, plus The Zimbabwe Independent